Tết Hàn Thực là ngày gì? Tại sao phải cúng bánh trôi vào Tết Hàn Thực | Anybook.vn - Anybook
Tết Hàn Thực là ngày gì? Tại sao phải cúng bánh trôi vào Tết Hàn Thực | Anybook.vn
Eo amin’ny fiainan’ny vahoaka Vietnamiana, indrindra fa ny foko any amin’ny faritra be tendrombohitra avaratra, ny Han Thuc Tet (3 martsa amin’ny kalandrie volana) dia fety lehibe. Noho izany, inona no niandohan’ny vanim-potoana Han Thuc Tet sy Thanh Minh?
Amin’ny andro faha-3 amin’ny volana fahatelo isan-taona, fantatra amin’ny anarana hoe Taom-baovao Han Thuc, ny fianakaviana tsirairay dia sahirana amin’ny fanomanana lovia misy mofomamy mitsingevana sy mofomamy misy zava-maniry mba hivavaka amin’i Bouddha sy hiankohoka amin’ny razana. Maro anefa no tsy mahafantatra ny niandohan’ity fetin’ny Tet ity. Inona ny Taombaovao Koreana? Araho ny lahatsoratra etsy ambany momba ny 123Job hahitanao ny valiny!
1 I. Nihavian’ny Taombaovao Han Thuc?
2 II. Tena Taom-baovao Qingming tokoa ve ny Taombaovao Koreana?
3 III. Inona no mampiavaka ny Taombaovao Koreana any Vietnam?
3.1 1. Inona no andro taom-baovao Han Thuc any Vietnam?
3.2 2. Nahoana ny Vietnamiana no manolotra mofomamy mitsingevana sy mofomamy misy zava-maniry?
3.2.1 2.1. Mankany amin’ny loharano
3.2.2 2.2. Fomban-drazana
3.2.3 2.3. Famerenana ny lasa
4 IV. Inona no tena ilain’ny fanomezana Taombaovao Koreana?
5 V. Ahoana ny fomba fanaovana pancakes amin’ny zava-maniry
5.1 1. Fizarana 1: Omano ny akora
5.2 2. Fizarana 2: Ahoana ny fomba fanaovana mofomamy mitsingevana, mofomamy vegetarian
5.2.1 Dingana 1: Manamboara koba mofomamy
5.2.2 Dingana 2: Omano ny mofomamy misy zava-maniry
5.2.3 Dingana 3: Amboary ny mofomamy
5.2.4 Dingana 4: Fomba fandrahoana mofomamy mitsingevana, mofo tsy misy zava-maniry
5.3 3. Ahoana ny fomba fahandro lasopy mofomamy misy zava-maniry
6 SATRIA. Eo am-pamaranana
I. Nihavian’ny Taombaovao Han Thuc?
Han Shi (sakafo mangatsiaka) dia heverina ho avy any Shina tamin’ny alalan’ny tantaran’i Gioi Tu Thoi nandritra ny Dinastie Zhou Atsinanana. Araka io angano io, nandritra ny vanim-potoanan’ny Lohataona sy Fararano, ny mpanjaka Tan Van Cong ao amin’ny fanjakan’i Tan dia nifanena tamin’ny korontana ary voatery nandao ny firenena sesitany. Tamin’izany fotoana izany dia nisy olon-kendry antsoina hoe Gioi Tu Thoi, izay nanaraka ny mpanjaka mba hanampy ny teti-dratsiny.
Inona ny Taombaovao Koreana?
Indray andro, teny an-dalana ho any amin’ny fialofana, lany ny sakafo, Gioi Tu Thoi dia tsy maintsy nanapaka mangingina ny feny mba handrahoana sakafo hohanin’ny mpanjaka. Rehefa avy nisakafo ny Mpanjaka Tan Van Cong dia nahafantatra izany fahafoizan-tena izany izy ary tena feno fankasitrahana tao am-pony. Gioi Tu Thoi dia nanaraka ny mpanjaka nandritra ny sivy ambin’ny folo taona, nandany imbetsaka teo am-pandriana, nanandrana tantely, nanao fanazaran-tena mafy mba ho tonga talenta. Taty aoriana dia nahazo ny seza fiandrianana indray i Tan Van Cong, niverina ho mpanjakan’i Tan, nanome voninahitra ny fanokanana sy anaram-boninahitra ho an’ireo manana asa fanompoana mendrika rehefa maty izy, saingy hadinony tsy nahy ny momba an’i Gioi Tu Thoi.
Tsy nitaraina koa i Gioi Tu Thoi, nihevitra fa ny fanohanana ny mpanjaka dia andraikitra sy adidin’ity mpanompo ity, fa tsy ho takalon’ny harena sy voninahitra. Taty aoriana dia niverina mangina tany an-tanindrazany izy, nitondra ny reniny tany an-tendrombohitra Dien Son mba hiafina, miaina andro aman’alina sy milamina.
Tsaroan’ny Mpanjaka Tan Van Cong tatỳ aoriana, ka nandefa olona hiverina hitady an’i Tu Thoi izy. Amin’ny maha-olona tsy miraharaha ny laza, Gioi Tu Thoi dia tapa-kevitra ny tsy hiverina handray ny valisoa. Nandidy ny handoro ny ala i Tan Van Cong mba hanerena an’i Tu Thoi hiseho. Tsy nampoizina fa nanana eritreritra mafy toy izany i Tu Thoi, ary niaritra fahafatesana tany an’ala niaraka tamin’ny reniny. Nangoraka ny mpanjaka, nanenina ny nataony, nanorina tempoly hivavahana amin’i Tu Thoi teo an-tendrombohitra ary nomeny anarana hoe Gioi Son io tendrombohitra io. Rehefa afaka izany, ny mpanjaka dia nanome baiko ny vahoaka mba hifady afo mandritra ny telo andro (hatramin’ny faha-3 ka hatramin’ny faha-5 amin’ny volana faha-3), mba tsy hihinana afa-tsy sakafo masaka mangatsiaka mba hanehoana ny fahatsiarovana azy ireo.
READ Doanh nghiệp vừa và nhỏ là gì? đặc trưng của doanh nghiệp vừa và nhỏ | Anybook.vn
Ny 3 martsa isan-taona dia manao lanonana ho fahatsiarovana ilay olon-kendry Gioi Tu Thoi ny vahoaka Shinoa. Tsy maintsy omanina ihany koa ny fanatitra ny andro mialoha noho ny fandrarana ny afo. Ny anarana Han Thuc Tet dia teraka noho izany antony izany.
Jereo bebe kokoa: Famintinana ireo fombafomba manan-danja indrindra mandritra ny fialan-tsasatra mahazatra Tet
II. Tena Taom-baovao Qingming tokoa ve ny Taombaovao Koreana?
Maro ny manontany tena hoe: Taom-baovao Thanh Minh ve i Han Thuc Tet? Hatramin’izao, mbola betsaka ny resabe manodidina ity raharaha ity. Araka ny angano Shinoa fahiny, ny Fetiben’ny Qingming dia ankalazaina amin’ny andro faha-3 amin’ny volana fahatelo isan-taona. Raha izany no izy, ny Taom-baovao Thanh Minh dia hifanojo amin’ny Taom-baovao Han Thuc.
Na izany aza, amin’ny alàlan’ny taranaka maro samihafa, indrindra amin’ny fiovan’ny kolontsaina sasany any amin’ny firenena tsirairay, ny Taom-baovao Thanh Minh sy ny Taom-baovao Han Thuc dia matetika misaraka amin’ny dikany. Amin’ny andron’ny Taom-baovao Han Thuc, matetika ny fianakaviana vietnamiana no manao sakafo (indrindra fa misy lovia 2 misy mofomamy misy rano sy mofomamy misy zava-maniry) hivavahana amin’ny razambeny. Ao anatin’ny fianakaviana no anaovana izany ary tsy mirona handeha lavitra.
Fantaro hoe inona no dikan’ny Taom-baovao Lunar?
Ao Vietnam, ny Taom-baovao Thanh Minh dia heverina ho fetin’ny fasana – izany hoe mitsidika, mikarakara ary manaja ny maty any amin’ny toerana nandevenana azy. Noho izany, amin’ny andron’ny Taom-baovao Thanh Minh, dia matetika ny olona no mikasa ny handeha lavitra, any amin’ny toeram-pandevenana ny maty mba hanolotra ditin-kazo manitra sy voankazo ary zavatra hafa tiany halefa any aminy. Thanh Minh Tet dia heverina ho fety manan-danja amin’ny taona, manampy ny Vietnamiana haneho ny fitiavany, ny fankasitrahana ary ny fanajana ny razambeny.
Han Thuc Tet matetika dia maharitra 3-4 andro, fara fahakeliny 1 herinandro (7 andro); fa miaraka amin’i Thanh Minh Tet, afaka maharitra 15 ka hatramin’ny 30 andro ny olona (izany hoe ao anatin’ny 1 volana). Amin’ny andron’ny fasana, matetika ny fianakaviana vietnamiana no mikarakara fitsangatsanganana lavitra, mampiaraka ny fitsidihana ny fasan’ny razambeny amin’ny fitsangatsanganana, mba hanamafisana ny firaisankina sy ny firaiketam-pon’ny mpianakavy. .
Arakaraky ny maha-zava-dehibe ny fiainana maoderina sy ny fiainana maoderina, ny taranaka tanora dia toa tafasaraka amin’ny fomba amam-panao sy ny fomba amam-panao hatry ny ela. Mivembena amin’ny asa isan’andro isika, revo amin’ny tebiteby amin’ny sakafo sy ny vola indraindray. Angamba izany no mahatonga antsika hanadino tsikelikely fa manana fety manan-danja ihany koa i Vietnam, dia ny Fetiben’ny Han Thuc.
Jereo koa: fomba amam-panao 13 sy fomban’ny Vietnamiana mandritra ny fialantsasatra Tet nentim-paharazana
III. Inona no mampiavaka ny Taombaovao Koreana any Vietnam?
1. Inona no andro taom-baovao Han Thuc any Vietnam?
Na dia avy amin’ny angano sinoa aza, rehefa nampidirina tany Vietnam, dia hafa ny dikan’ny Han Thuc Tet, ary ny fomba amam-panao amin’ny fanompoam-pivavahana Han Thuc koa dia nisy fiovana maro nifanaraka tamin’ny kolontsaina Vietnamiana. Raha ny marina, ny Taom-baovao Han Thuc dia natambatra tamin’ny fialan-tsasatry ny Tet mofomamy mitsingevana, mofomamy tsy misy zava-maniry, Tet tamin’ny volana martsa tany Vietnam, mampiseho mazava tsara ny toetran’ny kolontsaina sy ny fomba fiainan’ny olona Vietnamiana. Tsy toy ny taom-baovaon’ny volana ao Shina, any Vietnam, ny olona dia tsy mifady afo, ny mahandro dia mbola ara-dalàna.
Han Thuc Tet any Vietnam ihany koa dia tsy manolotra fanatitra ho fahatsiarovana ny olon-kendry Gioi Tu Thoi, Vietnamiana Tet dia midika indrindra ny Han Thuc Taom-baovao manoloana ny fiandohana, fahatsiarovana ny fahamendrehan’ny maty.
Ahoana no hankalazana an’i Han Thuc Tet any Vietnam?m
2. Nahoana ny Vietnamiana no manolotra mofomamy mitsingevana sy mofomamy misy zava-maniry?
Na dia avy any Shina aza, ny tena Taom-baovao Koreana ho an’ny vahoaka Vietnamiana dia mbola manana ny endriny manokana, feno toetra Vietnamiana. Amin’ny andro faha-3 amin’ny volana fahatelo isan-taona dia mihinana sakafo masaka mangatsiatsiaka amin’ny fo tso-po indrindra ny olona mba hahatsiaro ny fahamendrehan’ny fananganana ny maty.
READ Consolidate là gì? Cách sử dụng tính năng hợp nhất trang tính trong Excel | Anybook.vn
2.1. Mankany amin’ny loharano
Ny dikan’ny Taombaovao Han Thuc dia mankany amin’ny fakany, fahatsiarovana ny fahamendrehan’ny maty. Ohatra, fanaon’ny Vietnamiana ny manolotra mofomamy mitsingevana hankalazana ny Hai Ba Trung amin’ny 6 Martsa ao Ha Tay. Avy eo, tamin’ny fitsingerenan’ny tsingerintaona nahafatesan’i Hung King tamin’ny 10 Martsa, tonga tao amin’ny Tempolin’i Hung, Phu Tho ny Vietnamiana avy amin’ny lafivalon’ny firenena mba handoro ditin-kazo manitra sy hanolotra ny Taom-baovao Han Food, mofo tsy misy zava-maniry, ho fahatsiarovana ny niaviany. .. Mazava fa manana ny lokom-pirenentsika ny tena Taombaovao Koreana, maharitra eo amin’ny fananganana sy fiarovana ny firenena.
Ny mofomamy nentim-paharazana Shinoa Taom-baovao dia mahazatra amin’ity fialantsasatra ity. Nanomboka tamin’ny andro fahiny, ny Fetiben’ny Han Food dia niditra tononkalo nasionaly ho sakafo mahazatra mahazatra ny vahoaka Vietnamiana. Ny karazana mofomamy mitsingevana sy tsy misy zava-maniry dia vita amin’ny lafarinina varimbazaha manitra. Mofomamy misy rano mamolavola baolina kely, fotsy ny ivelany, siramamy mena ao anatiny, andrahoina ao anaty vilany misy rano mangotraka, rehefa mitsingevana ny mofomamy dia esorina ary masaka fotsiny. Raha ny momba ny mofomamy vegetarian dia boribory sy fisaka, tsy misy famenoana, apetraka amin’ny lovia kely, rehefa mihinana dia arotsaho rano siramamy eo amboniny.
2.3. Famerenana ny lasa
Amin’izao andro izao, mankafy mofo feno rano feno rano miaraka amin’ireo olon-tianay, mahatsapa ho mahatsapa ny maha-olombelona an’izao tontolo izao izahay. Olona maro ihany koa no nifampiresaka fa, amin’ity andro ity, dia mankalaza ny Taom-baovao Han Thuc miaraka amin’ny mofomamy sy mofomamy misy zava-maniry isika mba hamerenana ny tantara taloha, ny tantaran’ny firenentsika taloha. Misy ihany koa ny tantara iray milaza fa nandritra ny taom-baovao Han Thuc dia efa nisy hatramin’ny andron’i Hung Vuong ny pancakes ho an’ny zava-maniry ary mampahatsiahy ny angano momba ny “famonosana atody zato” nataon’i Au Co ny fomba fanaovana ireo mofomamy roa ireo. Ny mofo kely an-jatony dia maneho ny atody zato an’ny Duc Lac Long Quan. Ny mofomamy drift dia manondro atody 50 izay foy ho zaza 50 izay mandeha any anaty ala mba hanaraka ny reniny. Ny mofomamy legioma dia maneho atody 50 izay foy ho zaza 50 izay manaraka ny rainy mankany an-dranomasina.
IV. Inona no tena ilain’ny fanomezana Taombaovao Koreana?
Mba hivavahana amin’ny tena Taom-baovao Koreana amin’ny 3 martsa, ny fianakaviana tsirairay dia mila manomana mofomamy mitsingevana sy mofomamy misy zava-maniry; ditin-kazo manitra, voninkazo, areca voanjo; vera rano madio sy lovia misy voankazo dimy. Araka ny voalazan’i Trinh Sinh, mpikaroka ara-kolontsaina, ny isan’ny “manara-penitra” indrindra amin’ny mofo mitsingevana sy ny mofo tsy misy zava-maniry ao amin’ny lovia fanaterana dia 5 na 3 lovia misy mofomamy mitsingevana, 3 na 5 lovia misy mofo tsy misy zava-maniry. Ny dumplings dia vita amin’ny lafarinina varimbazaha voatoto amin’ny rano ary feno siramamy. Vary hanaovana mofomamy mitsingevana, ny mofo tsy misy zava-maniry dia tsy maintsy mamy miaraka amin’ny voninkazo mavo. Ho an’ny ampahany sivy amin’ny varimbazaha dia kely ny ampahany iray na ny ampahany roa dia tanora.
Ny siramamy tsara indrindra amin’ny famenoana mofomamy mitsingevana dia Duong Lieu, Cat Que, siramamy efamira, maranitra, mena, matevina ary mamy, miaraka amin’ny fofona mangatsiaka. Rehefa voavolavola ny mofomamy dia arotsaka ao anaty vilany misy rano mangotraka. Milentika ny mofomamy dia mitsingevana avy eo, “tree sinks seven floats, sivy floats”, dia avoaka ary atsobohy amin’ny rano mangotraka mba hampangatsiaka indray, dia avoaka ary apetraka eo ambony lovia. Ny lovia misy mofomamy mitsingevana dia voafafy voanio sesame fotsy natsatsika manitra.
V. Ahoana ny fomba fanaovana pancakes amin’ny zava-maniry
1. Fizarana 1: Omano ny akora
– Koba tsara toto hanaovana mofomamy mitsingevana: 500g
READ [Góc hướng nghiệp] Nhân học là gì? Ngành nhân học ra làm gì? | Anybook.vn
– tsaramaso maitso voahodina: 100g
– voanio voakiky : 100g – lavanila : 1 tube – lafarinina tapioka : 2 sotro fihinanana – siramamy voadio – siramamy fotsy : 150g
2. Fizarana 2: Ahoana ny fomba fanaovana mofomamy mitsingevana, mofomamy vegetarian
Dingana 1: Manamboara koba mofomamy
Apetraho ao anaty vilia lehibe ny koba, asio rano 1 kaopy ao anaty mikrofo ary ahodina mandritra ny 30s-45s eo ho eo amin’ny rano mafana. Araraka tsikelikely ao anaty vilia lafarinina ny rano, arotsaho amin’ny hazokely fisaka ary mametafeta azy amin’ny tananao. Ataovy azo antoka fa malama ny koba, mafy orina amin’ny tananao, tsy mandefitra loatra ary tsy maina. Ho toy ny tanimanga ho an’ny ankizy ny filazalazana ara-pihetseham-po. Raha maina loatra ny koba dia ho tsapanao ny vovoka ao anaty koba rehefa mihazona azy. Raha mavo loatra ilay izy dia ho somary lena, rehefa mangotraka ny mofomamy dia mora potipotika ary sarotra ny mijoro.
Tokony hojerenao raha tsy mitovy ny vovony taloha na ny vovoka vaovao mba hahafantarana ny fanoherana ny rano. Fa ny hamantatra ny vovoka dia tsy sarotra loatra. Ampio rano moramora ianao, dia ho mora kokoa ny fanitsiana. Rehefa vita ny koba dia aforeto amin’ny plastika ny sakafo mba tsy ho maina. Manaraka, manomana karazana famenoana roa ary afafazo voanio sesame ny tampony.
Ahoana ny fomba fanaovana pancakes vegetarian
Dingana 2: Omano ny mofomamy misy zava-maniry
Famenoana mofomamy vita amin’ny legioma: Ny tsaramaso maitso dia azo kosehina amin’ny rano mafana mandritra ny 2-3 ora na 1 alina. Apetraho ao anaty vilany ny tsaramaso maitso, arotsaka ny rano ary apetraho amin’ny hafanana ny hafanana. Rehefa mangotraka kelikely ny rano dia ampidino ny afo, asiana siramamy sy sira kely, asiana sira kely, asiana sira, tohizana ny fandrahoan-tsakafo mandra-pahafatin’ny rano. Eo am-pangotraka dia makà sotro lehibe na sotro lehibe, totohondry ary kapohina ny tsaramaso maitso mandra-pahalemy sy malefaka. Raha maina haingana loatra ny rano ary tsy masaka sy malefaka ny tsaramaso maitso dia ampio rano bebe kokoa.
Rehefa avy masaka sy voadio ny tsaramaso maitso dia tazonina ao anaty eran-tanan-kely mitovy habe amin’ny atody papelika. Tokony hifikitra tsara ny tsaramaso raha mbola mafana ny tsaramaso. Azonao atao ny manampy voanio voakiky ao anaty famenoana, raha tianao.
Famenoana mofomamy dumpling: Ny siramamy dia manapaka kely ny famenoana mofomamy.
Nafafy sesame teo amin’ny mofomamy: Atao sesame fotsy eo amin’ny 2-3 sotrokely, atokana ao anaty lovia.
Dingana 3: Amboary ny mofomamy
Zarao amin’ny ampahany mitovy ny koba mofomamy, boribory hanaovana ny crust. Fenugreek notapatapahina ho baolina kely miendrika ampongabendanitra. Ampiasao ny tananao hametahana ny kobam-pako ary apetraho eo afovoany ny siramamy vao notapatapahina. Ampiasao tsara ny tananao hametahana ny koba manodidina ny siramamy. Tohizo ny fanaovana mandra-pahatapitry ny koba efa voaomana.
Inona avy ireo dingana hanaovana pancakes amin’ny zava-maniry ho an’ny taom-baovao Han Thuc?
Dingana 4: Fomba fandrahoana mofomamy mitsingevana, mofo tsy misy zava-maniry
Atsofohy ao anaty vilany misy rano mangotraka ny mofomamy efa voavolavola, andrahoy mandra-pahatonga ny mofomamy hitsinkafona sy mazava, dia esory ary atsipazo ao anaty rano mangatsiaka. Avy eo dia asio sotro voatsindrona mba hanesorana ny lovia mba ho tsara tarehy ary haingo ny sesame natono eo ambonin’ny mofomamy.
3. Ahoana ny fomba fahandro lasopy mofomamy misy zava-maniry
Afangaro amin’ny siramamy sy rano 100g ny lafarinina tapioka, apetraka eo ambony fatana mba handrahoina mba ho matevina sy rano ny fangaro mangahazo, dia vonoina ny afo, asiana ranom-boaloboka mba hamerana ny hanitra. Apetraho eo ambony lovia ny mofomamy, fafao ny rano rehetra eo amin’ny lovia, ary avy eo dia ampiasao ny rantsan-tànanao hantsoboka ny voan’ny sesame voatoto eo ambonin’ilay mofomamy dia vita ianao. Mofomamy legioma ao anaty vilia baolina, aidino ranom tapioka eo amboniny, asio tsaramaso maitso etona, voanio voakiky mba hamerovero sy hameno ny mofomamy.
Jereo koa: Ny antsipirian’ny fandaharam-potoana fialan-tsasatra 2021 farany ho an’ny mpiasa
SATRIA. Eo am-pamaranana
Han Thuc Tet dia fotoana mety ho an’ny mpianakavy hivory sy hivory, hankafy sakafo matsiro amin’ny andro mangatsiaka. Han Thuc Tet dia manampy antsika hahatsiaro ireo efa nodimandry, hiara-mijery ny fahatsiarovana ny andro lasa, ary indrindra indrindra ny fandraisana ireo fety nentim-paharazana ao an-tanindrazana. Amin’izay dia manabe ny ankizy – ny taranaka ho avy ao amin’ny firenena mba hifikitra bebe kokoa amin’ny fomban-drazana ara-kolontsaina tsara ao Vietnam.
Antenaina fa ny lahatsoratra etsy ambony dia nanome anao fampahalalana mahasoa sy ny dikany masina amin’ny kolontsaina Vietnamiana. Maniry anao hanana fety Han Food mafana, fihaonana mafana miaraka amin’ny havana sy ny fianakaviana!
Previous: [Tiết lộ] công việc nhân viên marketing là gì? | Anybook.vn
Next: Cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của nhà thơ Quang Dũng | Anybook.vn